कृषी खबर Archives - Page4of6- www.kchhakhabar.com
बर्दिवास । महोत्तरी जिल्लाको उत्तरवर्ती क्षेत्रका किसान प्राङ्गारिक खेतीतिर आकर्षित भएका छन् । सघन तरकारी खेती गरिने जिल्लाको उत्तरवर्ती क्षेत्रका बर्दिवास र गौशाला नगरपालिका तथा भङ्गाहा, मटिहानी र पिपरा गाउँपालिका बस्तीका किसान विषादी र रासायनिक मलको प्रयोगबिना नै गरिने प्राङ्गारिक खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् । तरकारी, तेलहन, दलहन र उखुलगायतका नगदेबालीका लागि परम्परागत शैलीमै खनजोत र प्राङ्गारिक म...
बेमौसमी तरकारीमा महिला: ७० हजारसम्म आम्दानी
डडेल्धुरा, बैशाख । डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका वडा नं. ७ पोखराका महिला तरकारी खेतीमा लागेका छन् । धान, गहुँ जस्ता निर्वाहमुखी खेतीमा आश्रित महिलाहरु पछिल्ला दुई/तीन वर्ष यता आलु, काउली, फर्सी, प्याज जस्ता मौसमी र बेमौसमी तरकारीबाट मनग्गे आम्दानी गर्न सफल भएका हुन् । हिउँदे तरकारीबाट २५/३० हजार र वर्षे बालीबाट ६० देखि ७० हजारसम्मको आम्दानी भएको कृषक बताउँछन् । त्यहाँ उत्पादित तरकारी भने सदरमुक...
बिहिबार, बैशाख ०७, २०७४
देशभर ६ वटा कृषि क्याम्पस स्थापना गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले देशका विभिन्न ठाउँमा ६ वटा कृषि विषयका आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्ने तयारी गरेको बताउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको विशेष बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले कृषिलाई राष्ट्र निर्माणको मूल आधार बनाएको बताउनुभयो । उहाँले सिन्धुली, महोत्तरी, धनकुटा, गोरखा, स्याङजा र उदयपुरमा कृषि विषयको आंगिक...
मेहनत र आत्म विश्वास भए पैसाका लागि विदेशिनु पर्दैन
काठमाडौँ । धेरै सम्पत्ति आर्जन गर्ने रहर सबैलाई हुन्छ । त्यसमा पनि राजधानीसँगै सिमाना जोडिएका आसपासका जिल्लाका अधिकांश मानिसमा यो चाहना झनै बढी हुने गर्छ । त्यसैले त उनीहरु पैसाकै लागि या त सहरतिरै पसेर विभिन्न धन्दामा लागेका हुन्छन् या खाडी मुलुकमा श्रम र पसिना बेच्न तयार हुन्छन् । तर मिहेनत र आत्म विश्वास भए खाडी मुलुकको मरुभूमिमा गएर पसिना बगाउनुपर्दैन पैसा कमाउनलाई । मात्र मेहनत, आत्मविश्वास र...
इटहरी /अदुवाको उचित मूल्य नपाएपछि सुनसरीको विष्णुपादुका र पाँचकन्या क्षेत्रका किसान मारमा परेका छन् । गत वर्ष किसानले अदुवा प्रतिकिलो रु ५० देखि रु ६० मा बिक्री गरेका थिए । यस वर्ष प्रतिकिलो रु १० देखि रु २० मा बिक्री भइरहेको छ । कृषि उपज केन्द्र धरान–१३ अमरहाटबाट गत वर्ष १० हजार मेट्रिक टन अदुवा बिक्री भएको थियो । एक हजार मेट्रिक टन स्थानीय बजारमा खपत भएको र बाँकी भारत निकासी भएको बजार व्यवस्थ...
ढोडेनी (बागलुङ), बागलुङ नगरपालिका–२ ढोडेनीका अगुवा कृषक त्रिलोचन सापकोटाले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर तरकारी खेती गर्नुभएको छ । तरकारीलगायत बालीलाई रोग किराबाट जोगाउन, गुणस्तरीय तरकारी उत्पादन वृद्धि गर्दै लागत घटाउने लक्ष्यका साथ उहाँले ‘हाइटेक टनेल’ भित्र तरकारी खेती गर्नुभएको हो । विगत २५ वर्षदेखि तरकारी खेती गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका ४३ वर्षीय सापकोटाद्वारा सञ्चालित कालीगण्डकी कृषि फार्मम...
धानको उत्पादन बढाउन कृषकलाई अनुदान
उदयपुर । चैते धानको उत्पादन बढाउनका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय उदयपुरले किसानलाई अनुदान दिने भएको छ । चालु आ व बाट सुरु भएको बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रम मार्फत चैते धान लगाउने किसानहरुलाई अनुदान दिन लागिएको हो । धानको उत्पादन बृद्धि गराउन सरकारले यस वर्षदेखि अनुदानको कार्यक्रम ल्याएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख सरोजकान्त अधिकारीले बताए । किसानलाई अनुदान दिँदा उनीहरु धान खेती गर्न ...
अष्ट्रेलियाबाट उन्नत जातका २३ पाठापाठी बाख्रा नेपालमा
काठमाडौँ / बहुमुखी कृषि फर्म प्रालि मोरङले व्यावसायिक बाख्रापालनका लागि अष्ट्रेलियाबाट उन्नत जातका २३ पाठापाठी आज नेपाल ल्याइएको छ । यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोयर जातको उक्त उन्नत बाख्रामध्ये २० पाठी र तीन वटा पाठा रहेको जानकारी दिएको छ । अष्ट्रेलियाबाट नेपाल ल्याउँदा प्रति पाठापाठी रु दुई लाख ५० हजार पर्नेे फर्मका कार्यकारी अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो । अष्ट्रेलियाबाट ल्...
केरा खेतीतर्फ मोरङका किसानहरू आकर्षित
मोरङ । मोरङका किसानले व्यवसायीक केराखेती गरेर आर्थीक उपार्जन थालेका छन् । मोरङको सुन्दर दुलारी ,कोशीहरैचा,बाहुनी ,टाडी,केरौन ,बयरवन, जाते, लेटाङ जस्ता क्षेत्रमा केराखेती हुदै आएको छ । मोरङको वयरवनका केरा किशान नरेश गुरागाँईका अनुसार मालभोग ,चिनिया चम्पा र जाजी केरा खेती मोरङमा व्यवसायीकरुपमा हुने गरेको छ । उत्पादित केरा इटहरी ,धरान साथै काठमान्डौ र पोखरा सम्म पुग्ने गरेको बाहुनीका केरा किशान उ...
बुधबार, चैत्र २३, २०७३
यस्तो छ इलाममा गाईले रेडियो सुन्नुको कारण
इलाम । गाई पनि रेडियो सुन्छन् भन्दा तपाई पत्याउनुहुन्छ ? तर इलाममा जब गाईले रेडियो सुन्छन् ‘पाउर काडेर’( फिँज काडेर) मस्त हुन्छन् । सफा, चटक्क परेको गाईगोठ देखेर यहाँ घुम्न आउने अनेकौँ कृषकहरु मन्त्रमुग्ध हुन्छन् र नयाँ प्रविधि र तरिका सिकेर फर्किन्छन् । गाईलाई तनावमुक्त वातावरण तयार गर्न इलामको सूर्योदय नगरपालिका–३ स्थित भालुखोपको त्रिबदर्श गाई फार्ममा रहेका उन्नत जातका गाईले विभिन्न एफएम रेडियोक...